आज कर्कट संक्रान्ति अर्थात् ‘लुतो फाल्ने’ दिन, के हाे लुताे फाल्ने भनेकाे ? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/आज कर्कट संक्रान्ति अर्थात् ‘लुतो फाल्ने’ दिन, के हाे लुताे फाल्ने भनेकाे ?
काठमाडौं, १ साउन । आज साउन महिनाको पहिलो दिन अर्थात् साउने सक्रान्ति, यसलाइ कर्कट संक्रान्ति पनि भनिन्छ । लुताे फाल्ने विशेष विधि अपनाएर याे संक्रान्ति देशभरि नै मनाइँदै छ ।
असार महिनाभर धान रोपाइँलगायतका खेतीपातीका कारण थाकेका किसान हिलोमैलो पखाली घरपरिवार र आफन्तका साथ रमाइलो गरी भोज खाएर साउने संक्रान्ति पर्व मनाउने परम्परा रहेको छ ।
साउन महिनामा सूर्य कर्कट राशीमा रहने भएकालो धेरै गर्मी हुने र निरन्तर झरि पर्ने तथा कृषकहरु कृषिकार्य गर्दा पानीमा भिज्ने, माटोमा खेल्ने, अनि हिलाम्मे हुने हुन्छ । जसका कारण मानिसलाई यो महिनामा विभिन्न किसिमका छालासँग सम्बन्धित रोगहरु विषेशगरी लुतो, दाद, घमौरा आउने बढी सम्भावना हुन्छ ।
साउने संक्रान्तिलाई यो परिपेक्षमा लुतो फाल्ने संक्रान्तिका रुपमा मनाउने चलन छ । लुतो फाल्ने आआफ्नै जनविश्वास रहेको छ । परम्परानुसार भलायो, कुकरडाइनो, लुतेझार, पानीअमला, कागती, अम्बा, नासपाती आदि औषधिका रुपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर कण्डारक नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फाल्ने गरिन्छ ।
यस दिन नदी किनारमा गई शरीरमा लेसिलो पहेंलो माटो दलेर नुहाउँदा फोहोरजन्य कारणबाट आउने लुतो, दाद फालिन्छ भन्ने जनविश्वाश छ भने कसैले भान्टालाई दूलो पारेर चौबाटोमा फालिदिएर नुहाएमा समेत लुतोबाट छुटकारा पाइने जनविश्वास रहिआएको छ । कतै भने आज बेलुका साझ परेपछि पैयाको हाँगा, कुरिल्लो आदि राखेर आगोको राको लाई फाल्ने चलन पनि छ ।
वर्तमान समयमा प्रचलनमा रहेको मेषादि निरयण १२ राशिचक्र मध्ये चौथो साउने संक्रान्तिको दिन असारे वर्षात, हिलोबाट लाग्न सक्ने रोगबाट जोगिन लुतो फाल्ने प्रचलन छ । यस अन्तर्गत कागती, निबुवा, अम्बा, अनार, नासपाती आदि फलफूलहरू चढाएर कण्डारक नामक राक्षसको पूजा गर्नाले दाद, लुतो खटिराजस्ता चर्मरोगको प्रकोपबाट बच्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ सांझमा कुकुर डाईनो, काग भलायो, कुरिलो, पानीसरो, पुरेनी, गलेनि आदि औषधीजन्य वनस्पतिहरू जलाएर घर-घरका आंगनबाट चारै दिशामा फ्यांकिन्छ, यसैलाई नै तुतो फ्यांकेको भन्ने चलन छ।
लुतो फ्याँक्दा नाङ्लो ठटाउने, शंख फुक्ने, घण्ट बजाउने, ढिकि कुट्ने तथा केहिवेरसम्म घरको ढोका बन्द गर्ने प्रचलन समेत रहिआएको छ ।
कतारमा हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् काम अनुसार दूतावासमा सम्पर्क गर्ने ठेगाना